स्वास्थ्य : नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन् । यसका औ’षधीय गुणका कारण आ’युर्वेदमा यसको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ ।
नीमलाई संस्कृ’तमा अ’रिष्ट भनिन्छ जसको अर्थ लाग्छ श्रेष्ठ, पूर्ण र कहिल्यै खराब नहुने । नीमका डाँठ, जरा, बोक्रा र फल सबैमा शक्ति’वर्द्धक तत्व विद्यमान हुन्छन् अनि रोगविरु’द्ध लड्छन् ।
यसको बो’क्रा विशे’षगरी औलो र छालासम्बन्धी रोग निको पार्नका लागि उपयोगी हुन्छन् । नीममा मधु’मेह, क्या’न्सर, मु’टुरोग, ए’लर्जी लगायतका कैयौं रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई स’र्वरोगनिवारि’णी भनिएको छ ।
सावधान ! यी खानेकुरा खाली पेटमा खाँदै हुनुहुन्छ ? निम्तिन सक्छ अ’ल्सर र… नि’द्रा नलागेर हैरान हुनुहुन्छ ? कागती खानुहो’स्पृ थ्वीमा जीवन सूर्यको शक्तिबाट नै चलेको हुन्छ ।
सूर्यको ऊर्जाबाट जन्मेको तमाम जीवहरूमा नीमले नै सबभन्दा बढी सूर्य ऊर्जा सोसेको छ । त्यसैले यसलाई रो’गनिवारक मानिएको छ । नीमको एक पातमा १५० भन्दा धेरै रासायनिक प्रबन्ध हुन्छ ।
यस धर्तीमा पाइने पातहरूमा नीमको पात नै सबैभन्दा जटिल हुन्छ । नीमको पातले मानसिक रोग, द’न्तरोग, छालाको रोग लगायत धेरै रोग निको पार्छ । तपाईंले घरमा नीम रोप्नुभएको छ भने तपाईंमा यसको राम्रो प्रभाव पर्छ ।
शरीरमा करोडौं ब्या’क्टेरिया हुन्छन् । तीमध्ये धेरैजसो ब्याक्टे’रियाहरू हानि’कारक हुन्छन् । ती हानि’कारक ब्या’क्टेरियालाई मार्नका लागि नुहाउनुअघि शरीरमा नीमको लेप लगाउनुस् र शरीरमै सुक्न दिनुस् । त्यसपछि पानीले मजाले धुनुस् ।
तपाईंको शरीरका सारा ब्या’क्टेरिया नष्ट हुन्छन् ।
यसको विकल्पमा नीमका केही पात पानीमा राखेर रातभरि छोडिदिनुस् अनि बिहान उठेर त्यो पानीले शरीर नुहाउनुस् । नीमले तपाईंको शरीर प्र’णालीलाई सफा राख्छ । यसले गर्मी पैदा गर्छ र शरीरमा तीव्र एवं प्रचण्ड ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ ।
२०७८ बैशाख २७, सोमबार १७:५५ गते 1 Minute 1004 Views